आउनुहोस्, एउटा संस्था खोलौँ | चितवन पोष्ट दैनिक
आउनुहोस्, एउटा संस्था खोलौँ
२०७० पुष १९, शुक्रबार ०४:२५ गते
जीवनमा धेरैचोटि व्यापार–व्यवसाय गरियो । एक–दुईवटा होइन, नौवटा । तर, ती संस्थाबाट मान्छे मुर्गा बनाउन सकिएन । ठग्न सकिएन, अर्थात् लुट्न सकिएन । मैले दसौँ श्रृंखलाको व्यापारमा हात हालेँ भने त्यो नितान्त लुट्ने धन्दामा केन्द्रित हुनेछ । मसँग सम्पर्क हुने वा सम्पर्कमा आउनेहरु मुर्गा हुनेछन्, अर्थात् कुखुरासमान हुनेछन् । म खुलेआम लुट्न उद्यत हुनेछु । मेरो संस्थालाई कुनै पनि सरकारी संयन्त्रले नियमन, नियन्त्रण तथा संहिता पालना गराउन सक्नेछैन । म मेरो संस्थामा मजस्तै लुटेराहरु राख्नेछु । मेरो संस्थाका एजेन्टहरु पनि लुटेरा हुनेछन् । लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रमा बदल्न हरसम्भव म प्रयत्नरत हुनेछु ।
त्यस्तो कुन संस्था छ त, कानुनसम्मत लुट्न मिल्ने वा विवेकसम्मत ठग्न सकिने ? कुन पेसा वा व्यवसाय त्यस्तो छ, जहाँ दिनहुँ सर्वसाधारणहरु मुर्गा बन्छन् वा लुरूलुरू मुर्गा बन्न विवश छन् ? जति लुटे पनि र जस्तोसुकै ढंगले लुटे पनि सम्मान पाइने वा सेवा गरेको ठहर्ने कुनै यस्तो व्यापार छैन ? आजको विश्वबजारलाई मूल्यांकन गर्दा कुन व्यवसाय शतप्रतिशत फाइदामा छ ? कसाहीले बोकाको टाउको देखाएर बाख्रीको मासु बेचेजस्तो कुनचाहिँ व्यावसाय छ त्यस्तो, जहाँ सर्वसाधारणको बिचल्ली होस्, रूवाबासी होस् अनि उठीबास होस् । जहाँ नाममात्रको सेवा होस्, सेवा आफ्नै पेवा होस् अनि आफूलाई मेवा होस् ।
मैले गर्ने व्यवसायले मान्छेहरुलाई भ्रम छर्न सफल होस् । कर्मचारीहरुलाई नाममात्रको जागिर होस् । आशा, सपना र रोजगारको केन्द्र भजाएर मैले वा मसँग सहकार्य गर्नेहरुले रजाइँ गर्न सकून् । पैसा कमाउनका लागि जोखिम मल्नु परोस् कि मार्नु÷मर्नु परोस्, त्यसमा मलाई कत्ति सरोकार छैन । मानवीय संवेदना, मूल्य र मानवताको उच्चारणसमेत गर्न नपरोस् । गरिब, दीनदुःखी, असहाय, अपाङ्ग, विपन्न जोसुकै होऊन्, मलाई दामसँग सरोकार हुन्छ । परिवार, आफन्त, नातागोता, छिमेकी, साथीभाइ मिथ्या हुन् । यी भनेका पैसा नहुँदा वा आपतविपद् पर्दामात्र काम लाग्ने मुर्गाहरु हुन् । मेरो व्यवसायसँग यिनीहरु बेखबर हुनेछन् । अर्थात्, पैसाका सवालमा मात्र यिनीहरुसँग मेरो संगत हुनेछ ।
हो, म एउटा संस्था खोल्ने विचारमा छु । मेरो भित्री आसय, लुट्ने कला तथा भ्रम छर्ने रणनीति अत्यन्त गोप्य हुनेछन् । म मान्छेको हैसियत हेरेर मेरो व्यवसाय सञ्चालन गर्नेछु । सर्वसाधारणलाई राहत दिनका लागि मैले संस्था खोल्न लागेको थोडा हुँ र ? सेवाग्राही आहत हुनुपर्छ । पीडित हुनुपर्छ । मर्माहत हुनुपर्छ । जसरी हुन्छ, जे गरेर हुन्छ मलाई पैसा कमाउनुछ । पैसा नै मेरो सबैथोक हो । इज्जत, प्रतिष्ठा, मानसम्मान, नाम र मेरो शैक्षिक अवस्थासमेत पैसासँग सरोकार राख्छ । म सपना देख्न चाहन्नँ । सपना देख्ने समयमा पनि मान्छेलाई मुर्गा हान्ने ‘फर्मुला’ बनाउँछु । म निद्रामा पनि रहन्नँ । रातभर जाग्राम रहेर कसरी लुट्न सकिन्छ, त्यसको योजना बनाउँछु ।
पैसा नहुँदा कति व्यक्ति अकालमा मरे । डा. चित्रप्रसाद वाग्ले पैसाको अभावमा भौँतारिएर मरे । उनले पडाडी जनताहरुको स्वास्थ्य सेवा गरेर पैसा कमाएनन् । अर्थात्, जति कमाए त्यसले उनको उपचारका लागिसमेत पुगेन । लुट्ने कला जानेको भए, या गरेको भए अहिले चित्रप्रसाद वरिष्ठहरुका बाउ बन्नेथिए । तर कठै, उनलाई राज्यले पनि कदर गरेन । अरबपति डाक्टरहरुले समेत पत्याएनन् । मर्ने दिनसम्म पनि उनी आशावादी नै भए । सहयोगका लागि याचना गरे । तर, उनकै पेसा व्यावसाय अँगाल्नेहरुबाट पनि सहयोग पाएनन् । नेपालमा कति व्यक्ति उपचार नपाएरै दिनहुँ मर्दैछन् । सिटामोल नपाएर मृत्यु वरण गर्ने पनि छन् । कवि, कलाकार, गायक, पत्रकार, नायक, चित्रकार सबै पीडित छन् । राष्ट्रले स्रष्टा मानेको व्यक्ति पनि पैसाकै अभावमा मरेको छ । मर्ने त एक दिन सबै मर्ने नै हो । पैसा कमाएकाहरु वा पैसा नै खाएर बाँच्नेहरु समेत मर्ने नै हुन् । खान नपाएर होस् वा धेरै खाएकै कारण मर्ने पनि छन् । विश्वलाई हेर्ने हो भने मात्र नेपालको अवस्था थाहा हुन्छ । नेपालमात्र हेर्नेलाई सबै राम्रै लाग्छ । सबै ठीकै लाग्छ । अर्थात्, आफ्नो मात्र हेर्नेका लागि वा बुझ्नेका लागि अरुका बारेमा केही थाहा हुँदैन । मतलब पनि हुँदैन । आफू भलो त जगत् भलो ।
म मान्छेहरुको दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्दिनँ । उनीहरु भोकै रहून् कि उपचार नपाएर मरुन्, मलाई केको चासो ? दुनियाँका बच्चाहरु चिसोले कठ्यांग्रिएर मरुन् या लुगलुग काँपेर जाग्राम रहून्, मलाई मतलब छैन । मेरा बालबच्चा हिटर बालेर सुत्छन् । गिजरको पानीले नुहाउँछन् । प्राइभेट टिचरमार्फत् पढ्छन् । प्लेन चढेर विदेश भ्रमण गर्छन् । जाडो मनाउन, नयाँ वर्ष मनाउन विदेश नै रोज्छन् । विदेशी परिकार खान्छन् । विदेशी पहिरन लगाउँछन् । विदेशी भाषा बोल्छन्, संस्कार रूचाउँछन् र फिल्म हेर्छन् । आधुनिक युगमा मेरो लाइफ स्टायल र लाइफ हुड अरुकै जस्तो हुनुपर्छ भन्ने के छ र ? मलाई अरुजस्तो हुनुछैन, आफूभन्दा भिन्न पनि हुनुछैन । म जस्तो छु, ठीकै छु । जे गर्दैछु, मेरा निम्ति र मेरो आत्मसन्तोषका लागि गर्दैछु । अर्थात् भनौँ, म लुट्ने पेसा अँगाल्न खोजिरहेछु ।
म अखबारहरुमा पढ्छु, एफएमहरुमा सुन्छु र टिभीहरुमा हेर्छु– कति मनकारी व्यक्तिहरुले गरिब गाउँमा कम्बल बाँडे रे, सोलार जोडे रे अनि खाद्यान्न सहयोग गरे रे । आगलागीपीडितलाई राहत दिए, सुकुमबासीबस्ती तथा विपन्न समुदायका लागि सामग्री हस्तान्तरण भए, विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाए, अपाङ्गले ह्वीलचेयर पाए, वृद्ववृद्वालाई भोजन गराइयो, सम्मान गरियो । तर, मलाई सबैथोक निरर्थक लाग्छ । आफूमा दान, धर्मको भावना नभएर हो वा पापपुण्यको ज्ञान नभएर हो । अरुलाई सेवा गर्न जानेको छैन । अहिलेसम्म मेरा हातहरु माथि परेका पनि छैनन् । समाजसेवाको भावना जागृत हुन सकेको छैन ।
मरेपछि स्वर्ग गइएला भनेर पनि कसैले धर्म गर्छ र ? फेरि मैले अँगाल्न लागेको पेसामा दया, धर्म, करूणा, प्रेम र सहयोगको भावना भन्ने शब्दै हुँदैन । बरू, उस्तैपरे चन्दा, घूस, कमिसन, बोनस, बिजनेस प्रमोसन तथा बाउन्सर खर्चको प्रबन्ध गरिन्छ । तर अकालमा मर्नेहरुका लागि, अनिकाल लागेर मर्न विवश हुनेहरुका लागि, विपन्न र गरिबीले गाँजेका समुदायहरुका लागि मेरो तर्फबाट कुनै सहयोग हुनेछैन । मेरो मन त यति साह्रो पथ्थरसमान छ कि मान्छे मरुन् कि कुकुर, मलाई कुनै पनि शोक र समवेदनाले नछुने भएको छ । मृत्युको समाचारले मेरो मन खिन्न नहुने भएको छ । देशको अवस्था, राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व, हिंसा, अपराधजस्ता विषयले मलाई विचलित बनाउन सक्दैन । मान्छेहरुले मलाई मानवीय संवेदना नभएको मान्छे भनून् या परोपकारी भावना नभएको व्यक्ति, मलाई केही फरकै पर्दैन त, म के गरुँ ?
मैले यतिविघ्न पढेको, लाखौँ लगानी गरेको र निकृष्ट काम गरेको अरुका लागि सहयोग गर्नका लागि होइन । मेरो केवल आर्थिक, भौतिक प्रगतिका लागि हो । विलासी जीवन बिताउन र आफ्नो सुखभोगका लागि मैले पैसा कमाउने हो र कमाउन चाहेको हो । यति भन्दै गर्दा तपाईंले मेरो बिजनेस प्यानका बारेमा अलिकति अड्कल पनि गरिसक्नुभयो होला । मेरो भावनासँग सहमत हुनुभएमा मलाई पनि तपाईंजस्तै शेयर होल्डरको जरूरत पर्नेछ । नेपालमै रहेर ‘मनोपोली’ बिजनेस गर्न सकिन्छ र मनग्गै कमाउन सकिन्छ भने किन अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलियालाई सपनाको सहर बनाउनुप¥यो ? किन सुन तस्करी, खाग तस्करी र ड्रग्स तस्करी गर्नुप¥यो ? किन अन्डरवल्र्डमा छिर्नुप¥यो, किन खतरापूर्ण बाटोमा हिँड्नुप¥यो ?
हो, म पैसा कमाउने व्यवसायका लागि ‘भिजन’ बनाउँदै छु । मेरो ‘प्लान’ तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? सहमत भए पनि असहमत भए पनि मलाई केही फरक पर्ने होइन । तर, म एक्लैले त्यो पेसा अँगाल्न सक्दिनँ । टिमवर्क, नेटवर्क र होमवर्क गर्नुपर्छ । सहकार्य त जसलाई पनि चाहिँदोरहेछ । फरकफरक आस्था राख्ने राजनीतिक दलमा त सहकार्य, सहमति र एकता चाहिन्छ भने हामी बस्नुपर्ने र बाँच्नुपर्ने यही समाजमा हो । एकलौटी रुपमा मेरो केही जोर चल्दैन । त्यसैले, एउटा सामुदायिक नाम जोडिएको तर अप्रत्यक्ष दाम जोडिएको संस्था खोल्ने मेरो चाहना हो । अहिले शतप्रतिशत नाफा र व्यावसायिक निरन्तरताको ग्यारेन्टी भएको व्यापारिक फर्म खोल्ने मेरो सपनालाई बिपनामा परिणत गर्न मलाई तपाईंहरुको साथ र सहयोग चाहिएको छ । सहयोग नै गर्न नजान्नेलाई सहयोग ? भनेर तपाईंले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ । स्वार्थसहितको सहयोग त सबैले गर्छन् र गर्नुपर्छ । आउनुहोस्, मिलेर एउटा ‘सामुदायिक अस्पताल’ खोलौँ । मसँग पार्टनरसिप गर्ने, नगर्ने तपाईंहरुको जो विचार । ठीकै छ…यसअघिका पार्टनरसिप व्यवसायहरु मलाई फापेन । त्यसैले, सामुदायिकतर्फ मोडिँदै छु । म उचित सुझाव चाहन्छु । मेरो दसौँ संस्करणको ‘बिजनेस’ यात्रा कस्तो होला ?